Famoriam-bahoakan’ny Pitak Siam Lasa Herisetra Tany Thailand · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Novambra 2012 4:03 GMT
Nivadika ho herisetra ny famoriam-bahoaka nokarakarain‘ny tambajotra Pitak Siam ho fanoherana ny governemanta, na ny “Arovy i Thailand” satria nifandona tamin'ny polisy ireo mpanao fihetsiketsehana tao Bangkok ny Sabotsy 24 Novambra 2012. Nitifitra entona mandatsa-dranomaso ny polisy mba hanaparitahana ireo vahoaka marobe izay nanandrana hiditra faritra mena.
Saksith Saiyasombut avy amin'ny Siam Voices dia nampita mivantana tamin'ny bilaogy ilay fihetsiketsehana. Mino izy fa hoe hifarana amin'iny tolakandro iny ilay fihetsiketsehana satria tsy dia nahangona olona mavitrika loatra ilay izy:
Ny lahatsary eto ambany dia maneho ny fifandonana teo amin'ny polisy sy ny mpanao hetsi-panoherana :
Ny tenifototra #pitaksiam sy #psiam no nampiasaina hanaraha-maso ny hetsika. Ireto ambany ireto ny fanehoan-kevitra vitsivitsy:
@bkkbase Tsy dia zava-dehibe loatra ny antony nampiatoana ilay hetsika. Niato ilay izy. Tsy nisy rà latsaka androany. Mandresy i Thailand. #PSiam
@Aim_NT Iray tamin'ny mpanao fihetsiketsehana no nitaraina hoe nahoana no faran'izay tsotra toy zany no niatoan'ilay famoriam-bahoaka nefa be ny heriny sy tanjany natontony tao ho fanohanana. Makkawan #Psiam
@Ryn_writes averiko tsindriana ity > RT @bkkbase: Jereo. Izao no fiasan'ny Demaokrasia. Omeo anjara fitenenana ny olona. Avelao ry zareo hiteny. Avelao ry zareo hody. Tsy misy ilàna izay ISA akory. #Psiam [ISA dia ny Lalànan'ny filaminana anatiny any Thailand]
@PravitR Ny masoko no nahita fa ny fifandonana faharoa tao amin'ny fihaonan-dàlana tao Misakawan dia nitranga taorian'ny fisisihan'ireo mpanao hetsi-panoherana hamaky ny sakana natan'ny polisy #Psiam
@freakingcat hifarana ao anatin'ny 30 mn monja ny hetsi-panoherana #pitaksiam satria manomboka ny tantara an-tsary ao amin'ny TV Thai
@thanr Noheveriko fa nanadino nametaka tamin'ny anarany ny teny hoe ‘demaokrasia’ ry #pitaksiam, kanjo avy eo oh…
@fratticcioli Ny hafanan'ny mitatao vovonana mbola namely mafy lavitra noho ny entona mandatsa-dranomaso mba hampitoniana ireo mpanao fihetsiketsehana #pitaksiam. Nahazo sakafo maimaim-poana ihany koa izahay.
Ny vondron'ny Lobaka Mena, izay ny mpitarika an-dry zareo dia mpiara-mitolona amin'ilay Praiminisitra teo aloha Thaksin Shinawatra sady rahalahin'i Yingluck, nanentana ny vahoaka mba tsy hanaraka ny fitakian'ny Pitak Siam